Sarri oo loo soo bandhigay qorshe uu uga soo baxsanayo kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 21 Feb 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea oo u muuqda mid waayihiisa Stamford Bridge ay gabaabsi yihiin ayaa waxaa loo soo bandhigay qorshe uu uga baxsanayo Chelsea, waxaana qorshahaas u soo bandhigtay kooxda Roma.
Wararka ka imaanaya Talyaaniga waxay sheegayaan in macallinkii hore ee Napoli Sarri uu la kulmay la taliyaha kooxda Roma Franco Baldini oo horey usoo ahaa agaasimihii dhanka farsamada Tottenham iyo gacan yarihii xulka Ingiriiska.
Dhowaan ayaa Baldini iyo Guddoomiyaha Roma Jim Pallotta waxay u soo dhoofeen London iyagoo la kulmay tababaraha cadaadiska badan saaran yahay ee Maurizio Sarri.
Haatan waxaa tababare u ah kooxda Roma Eusebio Di Francesco oo 49 jir ah, balse Roma ayaa doonaysa in ay naadiga dhan isbeddel ku sameyso, iyadoo sidoo kalena la tilmaamayo in Agaasimaha isboortiga Roma Monchi uu ku sii jeedo kooxda Arsenal.
Weli Roma ayaa waxaa xusuusteeda ka go’i la’ guuldarradii garoonka Stadio Olimpico ku soo gaartay markii ay 7-1 ay kaga adkaatay kooxda Fiorentina ciyaar ka tirsanayd Coppa Italia, taasoo taageerayaasha Roma ay marnaba liqi kari waayeen xilli kooxda ku jirto kaalinta 5-aad ee Serie A-da.
Isku soo wada duub Sarri oo si weyn looga yaqaanno Talyaaniga ayaa waxa uu danaynayaa Serie A-da, maadaama uu horey ugu soo shaac baxay kooxda Napoli.
Isku aadka wareega 16-ka Europe League oo Berito la sameynayo....(Chelsea iyo Arsenal oo....)